UK oo ka hadashay heshiiska xisbiyadda Somaliland ee doorashooyinka
HARGEYSA, Somaliland – Dowladda Ingiriiska ayaa durba waxay soo dhaweysay heshiiska ay maanta Hargeysa kaga dhawaaqeen xisbiyadda maamulka Somaliland ee lagu soo afjaray muranka doorashada maamulka.
Stuart Brown, wakiilka xukuumadda London u fadhiya Hargeysa, ayaa bartiisa gaarka ah ee Twitter-ka kusoo dhaweeyay heshiiskaas oo xeerinaya in doorashooyinka ay qabsoomaan isla sanadka 2020.
"UK waxay soo dhaweyneysaa heshiiska saddex geesoodka ah ee xisbiyadda ka gaareen doorashooyinka. Xaqiijinta doorka guddiga doorashada, degaameynta kuraasta iyo muddeynta doorashadda waa talaabooyin horey loogu qaadey doorashooyinka Somaliland ee 2020," ayuu yiri.
Diblumaasiga ayaa raaciyey: "Waxaan rajeynayaa in xisbiyadda ay xaqiijin doonan metelaada dadka laga tirada badan yahay iyo haweenka".
Beesha Caalamka gaar ahaan Midowga Yurub iyo Britain ayaa ku lug lahaa wadahadalada xalka loogu raadinayey xiisadda doorashooyinka Somaliland, kuwaas oo natiijooyin kasoo baxay qaarkood aanan la fulin.
Nin khalkhal geliyey amniga ra'iisul wasaaraha UK oo la qabtay
Caalamka 17.06.2020. 22:50